PSJTV | सन् २०२२ विश्व कपमा धेरै नेपाली रुनेछन्
कतारबाट मात्र यी युवाहरुको लाश दैनिक पन्ध्र ओटा बाकसमा आउँछ
बिहिबार, १४ असार २०७५ राजेश मिश्र
नेपालमा मेरा दौंतरीहरु अहिले विश्व कप फुटबलको आनन्दमा मग्न छन्। घुम्दै गरेको पृथ्वीमा त्यहाँ खेलको प्रत्यक्ष प्रशारण हुँदा रातको समय पर्दो रहेछ। यो भूगोलको पश्चिमी गोलार्द्द्को अस्थायी बासिन्दाको रुपमा यो खेल हुने समय या बिहानै अथवा दिउँसो पर्न जान्छ।
यसपटक मैले यो खेल एउटा पनि हेरेको छैन। समय नभएर होईन, मन नलागेर।
मलाई कुनै साहूको व्यवसायमा गएर घण्टा बजाउनु आवश्यक छैन। घरमै बसेर ल्याप्टप ठोक्छु अनि आफ्नो जोहो गर्छु।बुढीको आफ्नै सानो व्यवसाय छ, त्यसले भरथेग गर्नेनै भयो। मलाई लेख्न पढ्न यथेष्ट समय छ। यस अर्थमा म आफूलाई भाग्यमानी ठान्छु।
म बसेको शहरमा नेपाली, भारतीय वा काला जातिको बसोबास शुन्यप्राय छ। या त गोरा छन्, अथवा "हिस्पानिक" भनिने दक्षिण अमेरिकी, ल्याटीन समुदाय वा मेक्सिकन। शायद यो ओसनसाईड सिटी नामको शहरमा नेपाली दम्पति हामी मात्रै हौँ। त्यसैले फुटबलको नाममा बाजी थाप्ने अनि भोज खाने चार बर्षे चलनबाट हामी मुक्त छौं।
फुटबल नहेर्नुको अर्को कारण यो पनि हो कि, अहिलेको जमानामा फुटबल हेर्ने पर्दैन। फेसबुकमा साथीहरुको कमेन्ट मिनेट मिनेटमा ट्याङ्ग ट्याङ्ग गर्दै बजिरहन्छ। आधिकारिक कमेण्टेटरले के त्यस्तो कमेन्ट गर्ला, जो हाम्रा साथीहरु गर्छन। हाम्रा साथीहरुको सिको गरे ती तलबी टीप्पणी कर्ताहरुको तलब पक्कै बढ्ने थियो।
मेक्सिकोले खेलेको दिन मेरो घर वरिपरी विश्व कप फुटबलको स्वर सुनिन्छ। एकाबिहानी चरा कराउन ठीक्क परेको बेला एक हूल मान्छे कराउँछन्। "गॊऒऒऒल।" जुनिता सोद्द्छे, "के भयो?" म भन्छु "मेक्सिकोले गोल गर्यो होला।" हामी निदाउन खोज्छौं, तर निन्दा लागे पो? अनि छेउको फोन उठाएर फेसबुक खोल्यो, कुसुम भट्टराईको स्टाटस देखिन्छ, "यत्राको गोल? सुत्न दे मु…. "
एक छिन मनमनै हाँस्छु। फेसबुकको लमतन्ने पाना तल तान्दैगर्दा विष्णुहरि घिमिरेको पोष्टमा आंखा ठोक्किन्छ। उसले लेखेको छ, "यो चारतारेलाई यो छेकमा दशा नै लागेको रहेछ कि क्याहो? उता नेपालमा नेपाली कांग्रेस हार्यो, यता रसियामा जर्मनी," (आशय यस्तै थियो, शब्द ठ्याक्कै याद भएन।) कुसुम र बिष्णु दुवैजना मसंग कुनैबेला काम गरेका प्रतिभाशाली पत्रकार हुन्।
कुसुम "गेम" नहेर्दा पनि त्यसबाट प्रभावित छ। उसको निन्द्रा बिथोलिएको छ। बिष्णु पूर्वी तटको पेन्सिलभेनियामा कति घण्टा काम गर्छ मलाई थाहा छैन। तर उ आफ्ना छोराहरुलाई बन जंगल अनि नदि नाला घुमाएको भिडिओ पोष्ट पनि गर्छ। शायद कामकै बीचमा "गेम" पनि भ्याउँछ। अनि आफ्नो मनको कुरा पनि पोष्ट गरिहाल्छ। बिष्णुको कार्यक्षेत्रनै खेलकूद पत्रकारिता थियो नेपालमा।
न मलाई कुसुमले जस्तो फ्याट्टै "मू…" भनेर गाली गर्न आउँछ, न म बिष्णु जस्तो समर्पित नै हुन सक्छु। यो मामिलामा म न यता पर्न सक्छु, न उता। तर यो विश्वकप पछि सन् २०२२ मा हुने अर्को प्रतियोगिताको बारेमा म अहिले सोच्न बाध्य भएको छु।
हाम्रो प्राथमिकता !
यो विश्व कप फुटबल प्रतियोगिताको क्रममा एउटा कुरा स्पष्ट हुँदैछ। नेपालीहरु अर्जेन्टीना, ब्राजिल, जर्मनी , बेलायत, स्वीडेन, पोर्चुगल आदि ईत्यादि देशका फुटबल टोलीलाई धार्मिक रुपले प्रेम गर्छन। उनको यो अन्धभक्ति कहिले फेसबुकमा देखिन्छ, कहिले सय रुपियाँ भन्दा बढी प्रति लीटर पर्ने पेट्रोल पर्ने पैसा बालेर निकालेको मोटर साईकलको जुलुशबाट प्रष्टिन्छ। कसैको समर्पण प्रति औंला ठड्याउनु जायज नहोला। तर यो समर्पण आफनै मुलुकको टीमलाई थप शिक्षित प्रशिक्षित तुल्याउन किन हौसिंदैन भन्ने प्रश्नले मलाई गम्भीर तुल्याएको छ।
विश्व कप फुटबल २०१८ आखिर सम्पन्न हुनेछ। कुनै एउटा राष्ट्रले जित्नेछ। यो फुटबल मेलाको उभार सकिएपछि हामी सबै आआफ्नो दैनन्दिनमा फर्किनेछौँ।
त्यसपछि हामी फेरि फेसबुक र ट्वीटरमा फेरी लेख्न थाल्नेछौं, "मेलम्चीको पानी यो दशैंमा किन आएन?" अथवा "जोरपाटी देखि साँखु जाने बाटो किन अझै हिलाम्म्य छ?" अथवा "भ्रष्टाचारीलाई किन कारवाही हुँदैन?" सरकारले केही गर्नेछैन। तर भाषण पक्कै गर्नेछ। हुने केही होईन।
चार बर्ष पछि सन् २०२२ मा फेरी अर्को बिश्व कप फुटबल प्रतियोगिताको उद्घाटन हुनेछ। त्यो बेला सम्म हामीले धेरै कुरा बिर्सिसकेका हुनेछौं। तर केपी ओली सरकारको आयु, बीचमा कुनै बिलखबन्दमा नपर्ने हो भने अझै एक बर्ष कायम हुनेछ।
हामी सन् २०२२ मा फेरी विश्व कप फुटबल हेर्न प्लाज्मा टीभी को अगाडि बसेर बाजी थाप्नेछौँ। तर हामीले एउटा कुरा बिर्सिन नहुने कुरा छ। त्यो विश्व कप फुटबल प्रतियोगिताका आवश्यक रंगशाला, पर्यटक केन्द्र र खेलाडी आवास बनाउने क्रममा हाम्रा धेरै युवाहरुले आफ्नो प्राणको आहूती दिएका छन्। नेपाल सरकारको तथ्यांक अनुसार अहिले दैनिक पन्ध्र सय युवाहरु खाडी मुलुकमा काम गर्न हाम्रो एक मात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट उड्छन।
आई एल ओ को रिपोर्ट अनुसार पैंतीस लाख भन्दा बढी नेपाली युवाहरु खाडी राष्ट्र र मलेशियामा पसीना बगाउन्दैछन। उनीहरुको पैसाले मुलुकको ग्रामिण जनजीवन चलेको छ। कतारबाट मात्र यी युवाहरुको लाश दैनिक पन्ध्र ओटा बाकसमा आउँछ।
यी विदेशिने युवाहरुले लिएको ऋणबाट सरकारी अधिकारी, नेता, दलाल र माफियाको रुपमा मौलाएको बैदेशिक रोजगारदाताहरुको सिण्डिकेटले उनीहरुको रगत चुस्छ। यीनै युवाहरुको पासपोर्ट बिदेशमा साहूले खोस्छन। नेपाली दुतावासले वास्ता गर्दैन। नेपाली राजदूतहरु राजनीतिक पार्टीका नेताहरुलाई पैसा दिएर भर्ना भएका चुङ्गीकर ठेक्का उठाउने दलाल जस्ता छन्।
सन् २०२२ मा फुटबल हेर्ने नेपालीहरुले आफ्नो प्रीय "टीम" अर्जेन्टीना, ब्राजिल, जर्मनी, बेलायत, स्वीडेन जस्ता बिकसित मुलुकका खेलाडीका पक्षमा ताली बजाउँदा कतारको रंगशालामा बगेको नेपाली रगत र पसीना र उनीहरुको बाध्यताको किञ्चित ख्याल गर्ने छैनन्। नेपालीहरुको बानी नै यस्तै हो।
नेपालीहरुले आआफ्ना "टीम"का लागेको देखाएको समर्थन आफैमा एउटा शक्ति हो। यो शक्तिलाई नेपाली फुटबल "टीम" लाई सशक्त तुल्याउन खर्च गरे कसो होला? केपी ओली र उनको "टीम"लाई नेपाली युवाहरुले फुटबल मौसमको जस्तै जोशमा "चेक" गर्न सके कसो होला? अथवा दुई तिहाई पाएका ओलीले यो युवा उर्जालाई सकारात्मक दिशा दिन सके कसो होला? होला होला होला, यी सबै कल्पनाजन्य आशा हुन्, जो नेपालमा पुरा हुने सम्भावना छैन।
सन् २०२२ को कतार विश्व कपमा फुटबल हेरेर ताली बजाउने भन्दा रुने नेपाली धेरै हुनु पर्ने हो।